Shan State Supreme Court - သတင်းများ
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် နှင့် တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးများ၏ (၂၁) ကြိမ်မြောက်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းမှာကြား သည့်အစည်းအဝေး
ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် နှင့် တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးများ၏ (၂၁) ကြိမ် မြောက်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းမှာကြားသည့် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ ၄ ရက် (စနေနေ့) နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှစပြီး Zoom application ကိုအသုံးပြု၍ Online Virtual Meeting စနစ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် နှင့် တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးများ၏ ( ၂၁ ) ကြိမ် မြောက်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ လမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းမှာကြားခဲ့ပါ သည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး ဒေါ်နန်းမေယဉ်မှ ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းခဲ့ပါ သည်။ ထို့နောက် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသတရားရုံးများ၊ ခရိုင်တရားရုံးများ၊ မြို့နယ် တရားရုံးများမှ မရှင်းလင်းသည့်အချက်များကို မေးမြန်းကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများမှ တရားစီရင်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသော အမှားများ၊ အားနည်း ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်မှ နိဂုံးချုပ်အမှာ စကားပြောကြား၍ အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၁:၄၅)နာရီတွင် ခေတ္တရပ်နား၍ (၁၂:၄၅) တွင် ပြန်လည်ကျင်းပပြီး အစည်းအဝေးအား ညနေ(၃ : ၀၀) တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်မှ ပြည်နယ်တရားသူ ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး ( ၂ ) ဦး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ( ၁ ) ဦး၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (၁) ဦး၊ ဦးစီးအရာရှိ(၁)ဦး၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်တရားရုံးမှ တွဲဖက် မြို့နယ်တရားသူကြီး ( ၁ ) ဦး၊ စုစုပေါင်း ( ၈ ) ဦးတို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူးသည် ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး ရုံးခန်းတွင်လည်းကောင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (၁) ဦးသည် ရုံးအဖွဲ့မှူးရုံးခန်းတွင်လည်းကောင်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကျန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ ဒေသတရားသူကြီးများ၊ ခရိုင်တရားသူကြီးများ၊ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးများ၊ မြို့နယ်တရားသူကြီးများ၊ တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီးများ၊ ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး များ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးများ စုစု​ပေါင်း ( ၉၂ ) ဦးသည် Online မှတဆင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးများ၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး၊ တရားရေးအရာရှိများ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း/ဒေသတရားသူကြီးများ၊ ခရိုင်တရားသူကြီးများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
(၁)နှစ်ထက်ကြန့်ကြာရာဇဝတ်မှုများနှင့် (၃)နှစ်ထက်ကြန့်ကြာတရားမမှုများ အခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး
ဝန်ထမ်းများCovid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးစီးမှုအခြေအနေ နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ အမိန့်အမှတ် - ၁၇၂ /၂၀၂၁ အရ ပိတ်သိမ်းသည့် အမှု စာရင်းများအခြေအနေနှင့့်စပ်လျဉ်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုများနှင့် CDM ပြုလုပ်သည့် ဝန်ထမ်းများ အခြေအနေနှင့့်စပ်လျဉ်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေး
Copyright © 2021 High Court of Shan State. All Rights Reserved.
Last Updated:2September' 2021